June 2021 - Sainpwar
[ September 25, 2021 ] နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့သမီးလေးကို လွမ်းတဲ့အကြောင့်၀မ်းနည်းစွာရင်ဖွင့်လာတဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်း	Uncategorized
[ September 25, 2021 ] နိုင်ငံခေါင်းဆောင် ကိုလေးစားသောအားဖြင့် ဗိုလ်ချူပ် တပ်ခေါ်ရန်….	Uncategorized
[ September 25, 2021 ] KNU နှင့်ဖြစ်ပွားသည့် တိုက်ပွဲတွင် စစ်ကောင်စီတပ်သား ၂၅ ဦးသေ….	Uncategorized
[ September 25, 2021 ] လက်ထဲသေနတ်ရောက်လာရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ ဖြုတ်နည်းတပ်နည်း အသုံးပြုနည်းကို ပြောပြလာတဲ့ PDF လူငယ်လေး	Uncategorized
[ September 25, 2021 ] အလှူပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့ ဒါယကာ၊ဒါယိကာမတွေအတွက် ပိုက်ဆံတွေကြဲချပြီး ရွှေမိုးငွေမိုးရွာပေးခဲ့တဲ့ မြောက်ဦးဆရာတော်	Uncategorized
မွေးနေ့လေးကို စစ်ဘေးရှောင်စခန်းလေးတစ်ခုမှာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးဖြတ်သန်းရင်း ပျော်နေရှာတဲ့ ပရဟိတဆရာ၀န်မလေး ဒေါက်ဝာာအေးငြိမ်း
June 30, 2021 Bo Wai 0
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေအရ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ တိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီး စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ စစ်ရှောင်ဒေသတွေမှာ အစားအသောက်ချို့တဲ့မှု၊ ရေရှားပါးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီး သက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ ကလေးငယ်တွေအတော်များများ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ စစ်ဘေးရှောင်ဒေသတွေမှာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်နေတာကြောင့် ပရဟိတဆရာ၀န်မလေးတစ်ဦးက သူတတ်တဲ့ပညာနဲ့ စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေကို ကုသမှုပေးနေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ ၎င်းဆရာ၀န်မလေးက စစ်ဘေးသင့်ဒေသတွေမှာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျဂရုစိုက်မှုပေးနေပြီး အခက်အခဲတွေကြားကနေ ရိက္ခာတွေလည်းတတ်နိုင်သ၍လှူဒါန်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ ၎င်းပရဟိတဆရာ၀န်မလေးရဲ့ ၂၅နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ သူမရဲ့ မွေးနေ့လေးကိုစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတစ်ခုမှာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးဖြတ်သန်းရင်း စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေကို ကြက်သားဆန်ပြုတ်နဲ့ ချင်းပန်းသီးလေးတွေ ဝေပေးခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ စစ်ဘေးရှောင်ကလေးတွေခမျာ ဆရာ၀န်မလေးကျွေးတဲ့ ကြက်သားဆန်ပြုတ်ကိုအားရပါးရသောက်ကြရင်း ချင်းပန်းသီးလေးတွေယူကာ […]
ယနေ့ ဇွန်လ (၃၀) ရက် ညနေပိုင်းမှာ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီဖြစ်တဲ့ မေတိုးခိုင်
အနုပညာရှင်တွေ အများစုကတော့ မြန်မာ့အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ်တွေနဲ့အတူ အပြည့်အဝရပ်တည်ခဲ့ကြပါတယ် ။ သူတို့ရဲ့ အောင်မြင်တွေ ကျော်ကြားမှုတွေကို မေ့ကာ ပြည်သူတွေနဲ့ တစ်သားတည်း လမ်းမပေါ်အထိထွက်ကာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပါ ။ ဒါ့အပြင် သူတို့ရဲ့အကောင့်တွေကနေလည်း အစွမ်းကုန်နေ့ရောညပါ soeak out တွေလည်း လုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒါ့ကြာင့်လည်း ပုဒ်မ (၅၀၅-က) နဲ့ တရားစွဲဆိုခံရသူတွေ ရှိသလို တစ်ချို့ နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်တွေဆို ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ ဖမ်းဆီး […]
မင်းသွေးနဲ့ ရေမွန်ကို ရည်စူးပြီး သင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဖော်ကာ…..
အဆိုတော်ဖော်ကာကတော့ သီချင်းတွေကို ခံစားချက်အပြည့်နဲ့သီဆိုပြီး ပရိသတ်အားပေးမှုကို လက်ခံရရှိထားသူတစ်ယောက်ပါ။ ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်နဲ့ ရေးစပ်ထားတဲ့ သီချင်းတွေကို ကိုယ်တိုင်သီဆိုသူတစ်ယောက်လို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေ့လေးမှာတော့ ဖော်ကာတို့မိသားစုက မင်းသွေးနဲ့ ရေမွန်ကို ရည်စူးပြီး သင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဖော်ကာဟာမင်းသွေးနဲ့လဲ ညီအစ်ကိုလိုချစ်ခင်ခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အခုပရိသတ်တွေနှမျှောတသသဖြစ်နေကြရတဲ့ ရေမွန်နဲ့လဲ SIR အဖြစ်လက်တွဲညီကာ ချစ်ခင်ရင်းနှီးခဲ့ကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ဖော်ကာဟာ ရေမွန် နဲ့ TWO BAND SHOW လေး လုပ်ဖို့ တိုင်ပင်ထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
လုံးဝ အောင်မြင်နေဆဲ အောင်ဘာလေထီ သပိတ်
ဇူလိုင်လ ၁ရက် ဖွင့်မယ့် ၂၈ ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီ- ကျပ်-၂ ဘီလျံဖိုးလောက်ပဲ ရောင်းရတယ်။ အာဏာမသိမ်းခင်က ရောင်းရတာနဲ့စာရင် ၉၄% လောက် ကျဆင်းသွားတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ လကနဲ့ နှိုင်းရင်လည်း ကျဆင်းနေဆဲပဲ။ ဒီနှုန်းနဲ့ တွက်ရင် စစ်အာဏာမသိမ်းခင်က အစိုးရအတွက် အခွန်ငွေ တစ်နှစ် ၁၆၃ ဘီလျံလောက် ရတာကနေ အခု ၁၀ ဘီလျံ (မစို့မပို့လေးပဲ ) တောင် ပြည့်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ […]
မန္တလေး ကျုံးရေပြင်ထဲ ရေဆင်းချိုးတဲ့ စစ်ကောင်စီ တပ်သား သေဆုံး
မန္တလေး ကျုံးရေပြင်ထဲ ရေဆင်းချိုးတဲ့ စစ်ကောင်စီ တပ်သား သေဆုံး မန္တလေးမြို့ ၂၆ လမ်း ၊ ၇၈ လမ်း ကျုံးရေပြင်ထဲ ရေဆင်းချိုးတဲ့ စစ်ကောင်စီ တပ်သား ရေနစ်သေဆုံးမှု ဇွန်လ ၃၀ ရက် ညနေ ၄ နာရီလောက်က ဖြစ်ပွါးခဲ့ပါတယ်။ ရေနစ်သူဟာ အမှတ် (၂) တိုက်ပွဲဝင် စည်းရုံးရေးသင်တန်းကျောင်းမှာ တာဝန်ကျနေတဲ့ တပ်သား နိုင်လင်းကျော်ဖြစ်ပြီး နေ့လယ် ၃ နာရီခွဲ […]
တောထဲတောင်ထဲမှာ ခက်ခက်ခဲခဲရိက္ခာသွားသယ်ကြရင်း မမောနိုင်မပန်းနိုင်နဲ့ပျော်ရွှင်နေကြတဲ့ဟားငါးကောင်အဖွဲ့
ပရိသတ်တွေကို ရယ်မောပျော်ရွှင်စေနိုင်ပြီး လူငယ်လေးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ လူရွှင်တော်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ဟား(၅)ကောင်ကိုသိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဟား(၅)ကောင်အဖွဲ့ဟာ အမြဲလိုလိုပြောင်မြောက်ထိမိလှတဲ့ဟာသပြက်လုံးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကို အပြည့်အ၀ရရှိထားသလို ဖေဖော်ဝါရီလအစပိုင်းတည်းကတိုင် အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးမှာ ပြည်သူနဲ့အတူတစ်သားတည်းရပ်တည်ခဲ့တဲ့ လူရွှင်တော်တွေလည်းဖြစ်ပြီး အခုဆိုရင်လည်း လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာ စစ်သင်တန်းတက်ရောက်နေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။\_ ဟားငါးကောင်အဖွဲ့က အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်စဥ်တုန်းကလည်း တက်ညီလက်ညီရှိကြသလို အခုလိုအချိန်မှာလည်း ညီအစ်ကိုရင်းတွေပမာစည်းလုံးညီညွတ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဟားငါးကောင်အဖွဲ့က သူတို့ရဲ့ရပ်တည်ချက်အတိုင်းရဲရဲဝံ့ဝံ့လျှောက်လှမ်းနေကြတဲ့ လူငယ်လေးတွေဖြစ်ပြီး တောထဲမှာပင်ပန်းဆင်းရဲစွာနဲ့ စစ်ပညာသင်ယူနေကြရင်း မကြာခဏဆိုသလိုလည်း သူတို့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာကနေ လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေနဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေကို ပရိသတ်တွေအတွက် မျှဝေပေးလေ့ရှိတဲ့သူတွေပါ။ ယမန်နေ့ကလည်း လူရွှင်တော်တိုင်းကျော်ကသူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာကနေ […]
မိဘမပါဘဲ တစ်ယောက်တည်းပြင်ဆင်ပြီး Q ဝင်ဖို့သွားနေတဲ့ (၆)နှစ်အရွယ် ကလေးလေးရဲ့စိတ်မကောင်းစရာ ဗီဒီယိုဖိုင်
Covid – 19 ရောဂါဟာ နိုင်ငံအနှံ့အပြားဖြစ်ပွားနေပြီး လူအသက်ပေါင်းများစွာကို သေကြေပျက်စီးနေစေတာကြောင့် ဆိုးရွားလွန်းတဲ့ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါအဖြစ် WHO က သတ်မှတ်ကြေညာထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာတော့ တတိယလှိုင်းအဖြစ် ဗီဇပြောင်းကိုဗစ်ရောဂါပြန့်ပွားမှုအပြင် ပြည်တွင်းရေးမငြိမ်သက်တာတွေကြောင့်လည်း ပြည်သူတွေဟာ အန္တရာယ်အခက်အခဲတွေကို အမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်..။ လတ်တလောအခြေအနေတွေ အမျိုးမျိုးကြောင့် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေနဲ့ ထိရောက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေ နည်းပါးနေတာကြောင့် ရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့ ကလေးငယ်တွေမှာလည်း မိဘအုပ်ထိန်းသူမပါဘဲ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ Q ဝင်ဖို့ ပြင်ဆင်လုပ်ဆောင်နေကြရတာ တွေ့ရပါတယ်..။ မြို့နယ်တော်တော်များများမှာ […]
မပန်ဆယ်လို ပြောတာအတော်စုံပေမယ့်၈၈နောက်ပိုင်း အရှက်မရှိ လုပ်စားမှုတွေကို ဆက်ပြောပြပါမယ်
မပန်ဆယ်လို ပြောတာအတော်စုံပေမယ့်၈၈နောက်ပိုင်း အရှက်မရှိ လုပ်စားမှုတွေကို ဆက်ပြောပြပါမယ် ခွေးဟောင်တိုင်းထကြည့်စရာမလိုဘူးလို့ယူဆတဲ့အတွက် စစ်ခွေးဘောမကောင် ကျွန်တော်ကို တိုက်ခိုက်ပြောဆိုတာကို ဘာမှမတုန့်ပြန်ခဲ့ပါ။ မပန်ဆယ်လို တုန်ပြန်တာကိုတွေ့မှ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဟောင်နေတဲ့ခွေးကို အသံတိတ်အောင်ဆောင့်ကန်ရပါလားလို့သိလာပါတယ်။ မပန်ဆယ်လို ပြောတာအတော်စုံပေမယ့် သူ့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီရေးအရေခြုံပြီး ၈၈ နောက်ပိုင်း အရှက်မရှိ လုပ်စားမှုတွေကို ကျွန်တော်ဆက်ပြောပြပါမယ်။ – ၈၈ နောက်ပိုင်းထောက်လှမ်းရေးနဲ့ပေါင်းပြီး ကားရေဆေး နှင့် အလှပြင်ဆိုင်လုပ်ပါတယ်။ – မိုးကုတ်သူနဲ့ယူပြီး ကလေး ၂ ယောက်ရပါတယ်။ […]
နင်းပြားဘဝမှ ကုန်းထခြင်း ကျွန်တော့် ဘဝ ဖြစ်ရပ်မှန် နင်းပြားဘဝမှ ကုန်းထခြင်း ကျွန်တော့်ကို မြင်းခြံ မြို့နယ်၊ ခေါင်းကွဲရွာတွင် မွေးခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်အဖေသည် ဆေးရွက်ကြီးစိုက်သော တောင်သူ၊ ကျွန်တော့် အမေသည် မြို့သူ ဖြစ်ပြီး အဖေ နှင့်ရမှ ခေါင်းကွဲတွင် လိုက်နေကာ တောင်သူ အလုပ်လုပ်ခဲ့ရသည်။ တောင်သူဆိုသည့် အတိုင်း အလွန်ပင်ပန်းသည်။ အလုပ် ကို ပင်ပန်းဆင်းရဲကြီးစွာ လုပ်ရသည်။ နွား နှင့် ဖက်ရုန်း […]
စစ်ကောင်စီကို ကုလသမဂ္ဂက အသိအမှတ်ပြုထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထား
မြန်မာတစ်ပြည်လုံး၏ ဆန့်ကျင်မှုနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည့် စစ်ကောင်စီက ၎င်းတို့ဖွဲ့စည်းထားသည့် အစိုးရအဖွဲ့ကို ကုလနှင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများက တရားဝင်အစိုးရအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားပြီး ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကာ စစ်ကောင်စီ အသုံးအနှုန်းများကို နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သူများအနေဖြင့် သတင်း၌ ထည့်သွင်းအသုံး မပြုရန် စစ်ကောင်စီက ၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားသည့် သတင်းစာများမှတစ်ဆင့် ကြေငြာခဲ့သည်။ စစ်ကောင်စီကို ကုလသမဂ္ဂက အသိအမှတ်ပြုထားပြီးဖြစ်ကြောင်း လိမ်လည်ဖော်ပြထား ကြောင်း ယနေ့ထုတ် သတင်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ စစ်ကောင်စီ၊ စစ်အစိုးရဟုဘသတင်းများ၌ ဆက်လက်သုံးစွဲနေမည်ဆိုလျှင် တည်ဆဲဥပဒေများအရ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းစာတွင် […]
နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့သမီးလေးကို လွမ်းတဲ့အကြောင့်၀မ်းနည်းစွာရင်ဖွင့်လာတဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်း
အလှူပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့ ဒါယကာ၊ဒါယိကာမတွေအတွက် ပိုက်ဆံတွေကြဲချပြီး ရွှေမိုးငွေမိုးရွာပေးခဲ့တဲ့ မြောက်ဦးဆရာတော်